Akwụkwọ kacha mma Jöel Dicker dere, "Nwa iwe a na-akpasu iwe" | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Akwụkwọ kacha mma nke Jöel Dicker dere
Mgbe onye ọrụ ntanetị jụọ ajụjụ gbasara "akwụkwọ Jöel Dicker", nsonaazụ ya ga-eduzi ya Eziokwu banyere ikpe Harry Quebert. Ma ọ bụghị obere, ebe ọ bụ na akwụkwọ akụkọ a mere ka onye edemede ahụ ghọọ kpakpando. A sụgharịala ọrụ ahụ n'ihe karịrị asụsụ 40 ma rere ihe karịrị 4.000.000 gburugburu ụwa.
Ugbu a, el New York Times o deputara ya dika "prodigy prodigy prodigy"; mgbasa ozi ndị ọzọ dịka "Little Little Prince of Contemporary Black Literature." Ọ bụ ezie na na mmalite ọ bụghị ihe niile bụ Rosy, nke a akwụsịghị onye edemede ahụ. N'ụzọ dị iche, akara ọ bụla ọ dọtara na-aghọ ihe bara uru. Ihe akaebe nke a bụ akwụkwọ ya karịrị nde 10 ere, nke sụgharịrị gaa nnukwu ọganiihu.
1 Nchịkọta akụkọ ndụ Jöel Dicker
1.1 Mmalite ya na akwụkwọ
2 Akwụkwọ kacha mma nke Jöel Dicker dere
2.1 Eziokwu Banyere Harry Quebert Affair (2012)
2.3 Akwụkwọ Baltimore (2015)
2.4 Ọdịdị nke Stephanie Mailer (2018)
2.5 Ihe ilu nke ụlọ 622 (2020)
Nchịkọta akụkọ ndụ Jöel Dicker
Jöel Dicker bịara n'ụwa na June 16, 1985 na Geneva, obodo Switzerland nke asụsụ obodo ya bụ French. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ezigbo nwa akwụkwọ dị ka nwatakịrị, ọ na-egosipụtakarị nnukwu ihe okike maka leta. Naanị afọ iri ka o guzobere La Gazette des Animaux (Magazin anụmanụ), nke ọ chịkwara afọ asaa n’usoro. Ọrụ a nwetara ya onyinye Prix Cunéo maka Nchedo Ọdịdị dị ka "Onye isi nchịkọta akụkọ ntà na Switzerland".
Emechara nwata Dicker n'obodo ya, mana Na 19 o kpebiri ịga Paris. N'ebe ahụ, ọ gara klas na-eme ihe nkiri na ụlọ akwụkwọ ihe nkiri Ihe nkuzi Florent. Otu afọ mgbe nke ahụ gasịrị, ọ laghachiri Switzerland ịmụ iwu na Mahadum Geneva, wee nweta akara ugo na 2010.
Mmalite ya na akwụkwọ
Mgbe ị na-ekwu maka mbido Dicker dị ka onye edemede, enwere akụkọ dị mkpa: nsonye ya na asọmpi edemede nke ndị ntorobịa. Na asọmpi a ọkọnọ obere akwụkwọ akụkọ Agụ, e nyeghị ya ikike n'ihi na onye ọka ikpe ukwu gosipụtara enweghị obi abụọ banyere onye dere ya. Ọ bụ ezie na ọnọdụ ahụ wutere nwa okorobịa ahụ, ọ na-ahụ ya ugbu a dịka ihe mkpọbi ụkwụ nke mechara kpalie ya imeziwanye.
Na 2009, Dicker dechara akwụkwọ akụkọ mbụ ya akpọrọ Oge ikpe-azụ nke nna anyị ha, dabere na ọrụ nzuzo nke UK. Mgbe enweghi mmasị na onye nkwusa ọ bụla, na 2010 o kpebiri idebanye aha ya na Prix ​​des Ecrivains Genevois maka ọrụ ndị a na-agbasabeghị. Onye edemede ahụ meriri onyinye a dị mkpa, iji mezuo mbipụta ya otu afọ mgbe e mesịrị na Éditions de Fallois.
Ndị a bụ akwụkwọ kacha mma Jöel Dicker:
Eziokwu banyere ikpe Harry Quebert (2012)
Ihe odide a mere ka ihe ịga nke ọma nke onye na-eto eto akwụkwọ, nwee ihe karịrị nde 4 e rere n'ụwa. Na mgbakwunye na ịsụgharị ya n'ihe karịrị asụsụ iri anọ, a gbanwere ya na TV miniseries na 2015, nke ama ama ama ama ama ama aha ya bụ Patrick Dempsey. Okwesiri ighota na enyere ndi akwukwo a onyinye abuo di nkpa, dika:
Onyinye maka Ngozi nke French Academy
Prix ​​Goncourt des Lycéens, nke ụmụ akwụkwọ ahụ nyere
Ọ bụ akwụkwọ omimi mpụ na-amalite na 2008. E debere ya na obere obodo Aurora, New Hampshire. Akụkọ na-ewebata Marcos Goldman — onye edemede n’edemede — bi na New York, a na-arụgidekwa ya ka ọ rụchaa akwụkwọ edemede ya nke abụọ. Mgbe ọ na-achọ mmụọ nsọ, ọ matara na a na-ebo Harry Quebert - enyi ya na onye ode akwụkwọ ama ama nke igbu ọchụ nke obere Nola Kellergan, ihe merenụ na 1975.
Marcos, site na nsinammuo ya, kwenyesiri ike na Quebert, onye ndụmọdụ ya, aka ya dị ọcha, ya mere o kpebiri ịga Aurora iji nyere aka dozie nsogbu ahụ. A na-amalite atụmatụ nke akwụkwọ a na-enweghị atụ, nke na-ewere ọnọdụ n'etiti oge dị iche iche -1975, 1998 na 2008- na ntọala dị iche iche. N’etiti ọtụtụ nchọpụta, Marcos, ya na nchọpụta ahụ, bidoro ide akwụkwọ banyere okwu a. Njedebe nke nkata a ga-abịa mgbe ogologo njem, nke dị mgbagwoju anya ma na-akpali akpali.
Eziokwu banyere ikpe ...
Akwụkwọ Baltimore (2015)
Ọ bụ akwụkwọ nke atọ nke Dicker bipụtara. Ihe na-adọrọ mmasị bụ na ọ nwere dị ka onye na-akwado ya Marcos Goldman, otu Eziokwu banyere ikpe Harry Quebert. Kaosinadị, ọ bụ ezie na ụfọdụ na-anwa ilekwasị anya na ọ bụ ihe na-aga n'ihu n'ahịa kachasị ere ahịa, ọ dịghị ihe nwere ike ịga n'ihu n'eziokwu ahụ. Ikekwe naanị otu ihe ndabara mere n'etiti ederede abụọ ahụ bụ na ha nwere otu onye bụ isi. N'ime ndị ọzọ, ọrụ ọhụụ a bụ ihe nkiri ezinụlọ nke dabere na mmebi nke mmekọrịta nke ndị otu Goldman caste.
Montclair Goldmans - akụkụ Marcos bụ - bụ ezinụlọ ezinụlọ na-ebi ndụ na New Jersey. N'aka nke ozo, ndi Baltimore Goldmans - ndi bi n'obodo a - ego na nkpuru okomoko gbara ha gburugburu. Na 2012, Marcos, n’icheta oge gara aga nke ya na ha ji obi ụtọ kerịta, kpebiri ịchọọ maka nkọwa ga-eme ka ọ mata mgbe ezinụlọ ahụ kewara. Iji mee nke a, onye protagonist na-eme njem na Baltimore, bụ ebe etolitechara atụmatụ ahụ.
Nke nta nke nta, N'agbata ncheta oge niile nke ahụmịhe ezinụlọ, a kpughere eziokwu nzuzo gbara ọchịchịrị nke mere ka enweghị ego nke ndị Goldman. A na-ewepụta ihe ngosi dị ka ihe mgbagwoju anya na ncheta dị iche iche nke Marcos, nke pụtara na onye na-agụ ya aghaghị ị atta ntị n'ihe niile ma hazie nkwubi okwu ikpeazụ ha na ihe nkiri ahụ.
Akwụkwọ Baltimore ...
Ọnwụ nke Stephanie Mailer (2018)
Mgbe ezumike afọ 3 gasịrị, Dicker gosipụtara akwụkwọ nke anọ ya, ọzọ ịkụ nzọ dị omimi. Ọ bụ akụkọ na-eme na spa a na-akpọ Orphea, nke dị na Hamptons. Ihe a niile malitere na 1994, mgbe Samuel Paladin chọsiri ike ijide nwunye ya Meghan. Ka oge na-aga, nwoke ahụ hụrụ nwunye ya nwụrụ anwụ, n'ihu ụlọ Mayor Gordon.
Dị ka a ga - asị na ihe edere n'elu adịghị oke ọdachi, ihe niile na - aka njọ. Paladin, nke nwere nkụda mmụọ, kpebiri ịbanye n'ihe onwunwe nke onye ọrụ ahụ ma zute ọnọdụ jọgburu onwe ya na nke ọbara: mmadụ niile nọ n’ime ya nwụrụ anwụ. Ndị uwe ojii abụọ (Jesse Rosenberg na Dereck Scott) bụ ndị na-ahụ maka ịme nyocha ahụ, na-achịkwa ijide "ogbu mmadụ" ahụ.
Mgbe afọ iri abụọ gachara, Scott dabara na emume ezumike nka nke onye ọlụlụ Rosenberg; onye nta akụkọ ahụ gosikwara ebe ahụ Onye na-ezigara Stephanie. Ya boro ebubo na ndị nchọpụta mehiere ma jide onye na-ezighi ezi maka mpụ quadruple 1994. Ihe a o kwuru na-eme ka ndị ọrụ ahụ nwewe obi abụọ. Mgbe ahụ, ozi na-apụ n'anya n'ụzọ dị omimi, si otú ahụ na-ebute aghụghọ na ọnụ ọgụgụ mmadụ. Right na oge a na-achọ ihe ngosi dị n'etiti oge gara aga na ugbu a na-amalite n'ikpeazụ mejupụta ihe mgbagwoju anya nke ga-eduga n'eziokwu a na-atụghị anya ya.
Ntughari nke ...
Etu ilu nke ime ụlọ 622 (2020)
N’ime akwukwo ohuru ohuru a, onye enwetere n’ide akwụkwọ gara n’ihu na-ekwu ihe omimi. Ugbu a, isi ihe a dị na Switzerland Alps, ọkachasị na họtel ahụ mara mma Palacio de Verbier, n'oge oyi nke 2014. Ndị ọrụ nke ụlọ akụ Switzerland ama ama na-anọ ebe ahụ, ndị ga-enwe nzukọ iji kpọsaa onye nduzi ọhụrụ ahụ. N'abalị nke nhọpụta - n'ime ụlọ 622 - egbuo otu n'ime ndị isi nke ụlọ ọrụ ahụ. N’agbanyeghị na okwu a jọgburu onwe ya, edozighi mpụ ahụ wee nara ya ntaramahụhụ.
Afọ anọ mgbe ihe omume ahụ gasịrị - n'oge ọkọchị nke 2018 - otu onye edemede na-eto eto na ama ama (onye aha ya dị ka onye edemede, Jöel Dicker) nọrọ na họtel ahụ.. Nwoke ahụ na-anwa ikpochapụ onwe ya mgbe ọdịda ịhụnanya na anụ ahụ efu nke onye editọ ya. N’atụghị anya, ọ na - ezute Scarlett, ọmarịcha nwa akwụkwọ n’edemede akwụkwọ na - achọ iwebata ya n’oge oyi nke afọ 2014 mgbe ọ kọchara banyere igbu ọchụ ahụ dị omimi. Site n'oge ahụ, ha abụọ na-abanye nyocha iji kechie ihe na-adịghị mma n'etiti esemokwu ịhụnanya na aghụghọ.
Ihe enigma nke ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » ụdịdị » Black akwụkwọ » Akwụkwọ kacha mma JÃ¶el Dicker
Luis Villalon. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede El cielo sobre Alejandro
Akwụkwọ egwu kachasị mma (akụkụ abụọ)